Iindaba - Hebei Tomato 2019 imisebenzi yokwakha iqela
I-Hebei Tomato imisebenzi yokwakha iqela
U-Hebei Tomato waqhekeza eyona misebenzi mihle yokwakha iqela lonyaka ukusukela nge-9 ukuya kwi-13 ka-Agasti 2019.
Ukwenzela ukutyebisa ixesha labasebenzi, ukunciphisa uxinzelelo lomsebenzi, ukuphucula unxibelelwano nonxibelelwano phakathi kwabasebenzi, ukomeleza umanyano lweqela kunye namandla e-centripetal, kunye nokucwangcisa umsebenzi ongalibalekiyo wokwakha iqela e-Hebei Tomato.
Ngosuku lokuqala, inqwelomoya yalibaziseka ngenxa yemozulu. Ngethamsanqa, safika kakuhle.
Ngosuku lwesibini, sahamba ngenqwelo-mafutha kumhlaba weHulunbeier ongenamhlaba womntu, safika kwiindawo eziphakamileyo zoMlambo i-Mozhgrad, saza sangcamla “umthendeleko weqela elisibhozo” lesidlo kunye neThamsanqa elisibhozo. Emva kwemini, ndandwendwele i-Erguna National Wetland, ndidlula kwisiQithi seBlack Forest, ihlathi leengulube zasendle, ihlathi lomthi we-eucalyptus, isiqithi seentaka, iSitalato i-Kang, ulwandle lweentyatyambo olumanzi kunye nezinye iindawo ezintle. Ingcambu ecacileyo yemilambo ihamba ngokuzolileyo, kwaye amanzi agoso ajikeleze idlelo nonxweme. Amatyholo anamahlahla kwaye aluhlaza. Fika eGenhe ngokuhlwa kwaye ungcamle i-stew ekhethekileyo yendawo. Emva kwesidlo esipheleleyo, hlala kwikhabhathi ekudala uyilindile.
Ngosuku lwesithathu, saqala ukutyelela iLulu Guya Reindeer Park, ebizwa ngokuba “sisizwe sokuzingela” sokugqibela e-China. Yiyo kuphela ilizwe e-China eliphakamisa i-reindeer. Ifika eSahuan Ranch emini emaqanda, ihamba ngehlathi le-birch, kwaye ingene eMontenegro ngokuhlwa ukuze ikhwele ihashe. Ubumnandi, ipati yomlilo wangokuhlwa, uyonwabele incasa yegusha eyosiweyo iphela, uhlala kwi-yurt, ufumane amava omdlalo omnandi ngesimbo saseMongolia.
Ngosuku lwesine, ecaleni komlambo owolulwe luhlaza u-Erguna, sahamba ngendlela yomda weSino-Russia. Inkangeleko entle apha ikhuphe uxinzelelo kubasebenzi. Iingingqi ezinkulu zengca zandisa isifuba kwaye zandisa ubumbano. Ngokuhlwa eManzhouli, yonwabela iindawo ezintle zangaphandle zobusuku.
Ngosuku lwesihlanu, watyelela ukhuphiswano lwamahashe kwisizwe saseMongolia sikaBalhu, kwaye waluphelisa ngokuhlwa ngokuhlwa.
Ngalo msebenzi wokwakha iqela, ubumbano lwabasebenzi kunye nokusebenza ngempumelelo kuye kwandiswa, kwaye unxibelelwano phakathi kwabo luye lwandiswa. Ukuqonda macala omabini kuphuculwe, iimvakalelo zisondelwe, kwaye wonke umntu uye wantywiliselwa kwimeko engcono kunye nomdlandla ophezulu. Kumsebenzi wexesha elizayo, someleze ukuzithemba kwethu kunye nokuzimisela ukomeleza u-Hebei Temet.